မြို့ပုံစံဒီဇိုင်း→အသေးစားမြို့ပြဗိသုကာ☆ Metalco ☆ Bellitalia
မြို့ပုံစံဒီဇိုင်း - ပိုလန်ဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီတလီကုမ္ပဏီများ၏တစ် ဦး တည်းသောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။
METALCO • Bellitalia • မြို့ဒီဇိုင်း
စိတ် ၀ င်စားသူအားလုံးကိုပူးပေါင်းပါ ၀ င်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ဗိသုကာစတူဒီယို i ဒီဇိုင်နာများတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတဆင့်သို့မဟုတ်မှတဆင့် ရှုခင်းဗိသုကာအသင်းငါတို့ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့အသင်းသားတစ်ယောက်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဌာနချုပ်အသစ်သို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါသည် ul မှာ at Warsaw Fort Służew 1b / 10 ထူးခြားတဲ့တစ်သမိုင်းဝင်၌တည်၏ ခံတပ် 8.
ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အီတလီဒီဇိုင်နာများပါ ၀ င်မှုအတွက်အစည်းအဝေးများနှင့်ကွန်ဖရင့်များကိုဤနေရာတွင်ပြုလုပ်သည်။
Metalco - ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောအီတလီကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဤအုပ်စုပိုင် Bellitalia i မြို့ဒီဇိုင်း.
METALCO ၏စီးပွားဖြစ်အောင်မြင်မှုသည်ဒီဇိုင်းပညာ၊ အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်နာများနှင့်ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းတို့တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်သုတေသနနှင့်အတွေ့အကြုံတို့၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
METALCO ၏ထုတ်ကုန်များသည်တစ်မူထူးသောဒီဇိုင်းနှင့်ထူးခြားသောအရည်အသွေးရှိပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစျေးကွက်များတွင်ခွဲခြားသည်။ အားလုံးထုတ်လုပ်မှုနှင့်နည်းပညာဖြစ်စဉ်များဂေဟဗေဒနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အခြေခံမူကိုလေးစားခြင်းနှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်။
Bellitalia ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော METALCO အုပ်စု၏အီတလီကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကွန်ကရစ်၊ PDM၊ HPC၊ UHPC၊ ကျောက်နှင့်စကျင်ကျောက်စုစုပေါင်းအားလုံးမှမြို့ပြဗိသုကာဒီဇိုင်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်နှင့်မူပိုင်ခွင့် ULTRATENSE ကွန်ကရစ်.
ဒါဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ collection များကိုကျော်ကြားသည် ပန်းအိုး i ခုံတန်းရှည်အလေးချိန် ၃.၅ တန်ကျော်ရှိပြီးလှပသောသဘာ ၀ ကျသည့်ကျောက်သို့မဟုတ်စကျင်ကျောက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
စီးတီးဒီဇိုင်း ပါဝင်သည်အီတလီကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Metalco အုပ်စု BELLITALIA မှလာမယ့်။
၎င်းကုမ္ပဏီသည်ငယ်ရွယ်သောဒီဇိုင်နာများမှစုဆောင်းထားသည့်ကုမ္ပဏီငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး Metalco မှအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ပေါင်းစပ်။ ၎င်းတို့၏ collection များကိုဆန်းသစ်သောအတွေးအခေါ်များပေးသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည်ဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ် ပို၍ စျေးနှုန်းချိုသာသည်။
လောလောဆယ်လမ်းပရိဘောဂတွင်သစ်ပင်အဖုံးများပါ ၀ င်သည်။ ဤရွေ့ကားအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဗေဒဒြပ်စင်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများအတွက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မြို့ပြနယ်မြေအတွင်းရှိသစ်ပင်များသည်နေထိုင်သူများ၏ကျန်းမာရေး၊ အနားယူခြင်းနှင့်စိမ်းလန်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်သူများအတွက်ဗေဒဆိုင်ရာခံစားချက်များ၏အာမခံချက်ဖြစ်သည်။ ...
ခြောက်သွေ့သောမြူပိုးသန့်ဆေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသောမြူမှုစနစ်များကိုနေရာအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခန်းများကိုပိုးသန့်ဆေးရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားသောအခါကျန်းမာရေးအတွက်တာ ၀ န်ရှိသူများကထိုကဲ့သို့သောဖြေရှင်းနည်းများကိုမကြာခဏထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ပိုးသန့်ဆေး / လက်သန့်ရှင်းရေးစခန်းများသည်ငါတို့၏ကမ်းလှမ်းချက်တွင်ဗိသုကာအသေးစားတစ်ခုအနေနှင့်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်ဖြင့်ပိုးသန့်ဆေးခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစွန့်ပစ်ခြင်းကိုရိုးရှင်းစေသည်။ ကတ်တလောက်နှင့်ဈေးနှုန်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ >> လက်ဆေးခြင်း၊
အသေးစားဗိသုကာသည်မြို့ပြနေရာတွင်ပေါင်းစည်းထားသည့်သို့မဟုတ်သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသေးငယ်သောဗိသုကာဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများဖြင့်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နေရာတစ်ခုကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်လက္ခဏာတစ်ခုပေးသည်။ ကွန်ကရစ်တိုင်များ၊ ခေတ်သစ်ခုံတန်းရှည်များ၊ အမိုးများ၊ ပျဉ်ပြားများ၊ ပန်းအိုးများ၊ အမှိုက်သရိုက်များ၊ စက်ဘီးစင်များ၊
ဒါဟာဗိသုကာပညာ၏အလုပ်အကိုင်ကျေနပ်မှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုအများကြီးဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်အခမဲ့အလုပ်အကိုင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်ဗိသုကာပညာအဖြစ်အလုပ်စတင်နိုင်ရန်လမ်းကြောင်းရိုးရှင်းသို့မဟုတ်တိုတောင်းသည်မဟုတ်။ သိသာထင်ရှားသောလေ့လာမှုနှင့်အထူးပြုလေ့လာမှုအပြင်၊ အလိုဆန္ဒရှိသောဗိသုကာပညာရှင်လည်း ...